Ukucwaninga koju lwe-Ultrasonic - Hielscher Ultrasound Technology
Uju lujabulela isidingo esikhulu njengokudla nemithi. Ukucubungula nge-Ultrasonic kuyindlela ephumelelayo yokubhubhisa izingxenye ezingathandeki, njengekristalu kanye nemilenze yesilonda emanzini. Njengoba ubuchwepheshe bokucubungula obungashintshi, kubangela ukukhuphuka kwe-HMF ephansi kanye nokugcinwa okungcono kwe-diastase, iphunga nokuvutha.
Isendlalelo Sokucubungula Uju
Uju umkhiqizo ophezulu we-viscosity we-flavour nezici, umbala nokuthungwa.
uju iqukethe i-glucose, i-fructose, amanzi, i-maltose, i-triaccharides nezinye i-carbohydrate, i-sucrose, amaminerali, amaprotheni, amavithamini kanye ama-enzyme, imvubelo namanye ama-microorganisms angenakushisa futhi amancane amakhemikhali e-organic (bheka ishadi ngakwesokudla). Izinga eliphakeme le-tetracycline, ama-phenolic compounds kanye ne-hydrogen peroxide enunini anikezwa yizindawo zokulwa nama-antimicrobial.
Uju luqukethe ama-enzyme okugaya isitashi. Ama-enzyme azwela ekushiseni ngakho-ke bakhonza njenge inkomba yobuningi bezinyosi kanye ne-degree ukucubungula okushisayo. Ama-enzyme amakhulu ahlanganisa invertase (i-α-glucosidase), i-diastase (i-α-amylase) futhi i-glucose oxidase. Lawa angama-enzyme abalulekile. I-Diastase i-hydrolyses i-carbohydrate ukuze ikwazi ukugaya kalula. Invertase hydrolyses sucrose kanye maltose kuya glucose kanye fructose. I-glucose oxidase yenza i-glucose idale i-gluconic acid ne-hydrogen peroxide. Uju nalo luqukethe i-catalase ne-acid phosphatase. Umsebenzi we-enzyme uvame ukulinganiswa njengomsebenzi we-diastase futhi uboniswa ku inombolo ye-diastase (DN). Izindinganiso zezinyosi zikhomba ubuncane be-DN obuyisishiyagalolunye ezinyosi ezicutshungulwe.
Uju oluthile luqukethe izinto ezingathandeki, ezifana imvubelo (ngokuvamile osmophillic, tolerant-tolerant) nezinye ama-microorganisms angenakushisa. Bayibophezelekile khubaza of uju ngesikhathi isitoreji. Inani eliphakeme lemvubelo liholela esheshayo Ukuvuthwa of uju. Izinga lokuvuthwa koju liphinde lihlotshaniswe nokuqukethwe kwamanzi / umswakama. Okuqukethwe umswakama ka-17% kubhekwa njengezinga eliphephile ukuvimbela umsebenzi wesimvu. Ngakolunye uhlangothi, ithuba Crystallization kwanda ngokunciphisa kokuqukethwe komswakama. Isibalo semvubelo se-500cfu / mL noma ngaphansi sithathwa njengezinga elamukelekayo lentengiso.
I-Crystallization / i-Granulation
Ubuhle ngokwemvelo buyakhanya njengoba kunjalo supersaturated isishukela soshukela, okungaphezulu kuka-70% kokuqukethwe ushukela okuhlobene nokuqukethwe kwamanzi okungaba ngu-18%. I i-glucose igaxa ngokuzenzekelayo ngaphandle kombuso we-supersaturated, ngokulahlekelwa ngamanzi njengoba kuba isimo esiphezulu ngokwengeziwe se-glucose monohydrate. Lokhu kuholela ekusungulweni kwezigaba ezimbili – isigaba samanzi esiphezulu kanye nefomu eliqinile lokukristalline ngezansi. Ama-crystals akha i-lattice, ephilisa ezinye izingxenye zobuningi ngokumiswa, ngaleyo ndlela idale a semisolid isimo (Ibhodi leSizwe lezinyosi, 2007). I-Crystallization noma i-granulation ayithandeki njengoba kuwukuthi inkinga enkulu ekusetshenzisweni nokudayiswa koju. Futhi, i-crystallization ibeka umkhawulo wokugeleza koju olungaphenduliwe ngaphandle kweziqukathi zesitoreji.
Heat-Ukwelashwa ku-Uju Ukucutshungulwa
Ngemva kokukhipha kanye nokuhlunga, uju uphethwe ukwelashwa okushisayo ukuze ukunciphisa izinga lokuswakama nokubhubhisa imvubelo. Ukufudumala kusiza ukukhipha amakristalu in the uju. Nakuba, ukwelashwa okushisa kunganciphisa ngempumelelo ukunciphisa umswakama, ukunciphisa nokulibaziseka i-crystallization, nokubhubhisa imvubelo yamangqamuzana ngokuphelele, kuyenzeka futhi kubangele ukuwohloka komkhiqizo. Ukushisa kwandisa izinga le-hydroxymethylfurfural (i-HMF) kakhulu. Izinga eliphezulu elisemthethweni elisemthethweni le-HMF lingama-40mg / kg. Ngaphezu kwalokho, Ukushisa kunciphisa i-enzyme (isib. umsebenzi we-diastase) futhi kuthinta izimfanelo zokuzizwa futhi kuncishisa ukuvuselela ubusi. Ukushisa ukushisa kufaka umbala womuncu wemvelo (ukubola), futhi. Ikakhulu ukushisa okungaphezulu kuka 90 ° C kuphumela i-caramelization ushukela. Ukwelashwa okushisa kuphelela ekubhujisweni kwamagciwane ezinqamule ukushisa.
Ngenxa ye ukulinganiselwa kokwelashwa kokushisa, imizamo yokucwaninga igxile ezintweni ezingezona ezishisayo, njengemisebe ye-microwave, ukushisa kwe-infrared, ultrafiltration kanye ultrasonication.
I-ultrasonication iy ukucubungula okungalungile okunye okunye for imikhiqizo eminingi yokudla liquid. Its amandla amashini isetshenziselwa ukuthobeka kodwa isebenza kahle I-Microbial Inactivation futhi ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana. Lapho uju ubonakala ku-ultrasonication, iningi lalo imvubelo yamangqamuzana ibhujiswe. Imisipha yesilonda esasinda i-sonication ngokuvamile ilahlekelwa ikhono layo lokukhula. Lokhu kunciphisa izinga lokuvuthisa uju kakhulu.
I-ultrasonication ibuye futhi ukuqeda amakristalu akhona futhi ukuvimbela okunye ukukhipha i-crystallization ngoju. Kulesi sici, kufana nokushisa ubusi. Ukwehla kwesibindi ngokusizwa nge-ultrasonically kungasebenza kakhulu inqubo ephansi yokushisa of approx. 35 ° C futhi kungaba ukunciphisa isikhathi sokuphuza kuya kumasekhondi angaba ngu-30. I-Kai (2000) wafunda ukukhipha ama-ultrasonic ama-honeys ase-Australia (Brush box, i-Stringy bark, i-Yapunyah ne-Yellow box). Ucwaningo lwabonisa, ukuthi i-sonication ngevolumu ye-20kHz yanyakaza amakristalu kuju, ngokuphelele. Amasampula aphethwe yi-ultrasonically ahlala esimweni esicacile se-approx. Izinsuku ezingu-350 (+ 20% uma kuqhathaniswa nokwelashwa kokushisa). Ngenxa ye ukukhanya okuncane okushisa, ukuqubuka kwe-ultrasonic ku-a ukugcinwa okukhulu kwephunga ne-flavour. Amasampuli azinikele aveza kuphela ukunyuka okuphansi kwe-HMF futhi a ukwehlisa okuphansi emsebenzini we-diastase. Njengoba kunesidingo esincane esishisayo, ukusetshenziswa kwe-ultrasound kusiza ukugcina izindleko zokucubungula uma kuqhathaniswa nokushisa okuvamile nokupholisa.
I izifundo zikaKai futhi wembula, ukuthi izinhlobo ezahlukene zoju zidinga amandla ahlukene kanye nezikhathi zokuqamba ingane. Ngenxa yalesi sizathu, sincoma ukuziphatha kwezilingo ngokusebenzisa uhlelo lwe-bench-top sonication system. Izivivinyo zokuqala kufanele ziqhutshwe kwimodi ye-batch, kanti ukuhlolwa okuqhubekayo okudingekayo kudingeke ukuba kusetshenziswe iseli lokugeleza ukuze kuhlolwe kabusha noma ukuhlolwa kwe-inthanethi.
Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela imininingwane eyengeziwe maqondana nokusebenzisa i-ultrasound ekusebenzeni kwezinyosi.
U-Subramanian, R., Umesh Hebbar, H., Rastogi, NK (2007): Ukucutshungulwa koHu: Ukubuyekeza, ku: I-International Journal of Properties Properties, 10: 127-143, 2007.
I-Kai, S. (2000): Ukuphenywa kokuqothulwa kwama-ultrasonic amaHoneys ase-Australia, i-University of Queensland (e-Australia), uMnyango wezobuchwepheshe bezobuchwepheshe.
I-National Honey Board (2007): AmaSpredishithi Eqiniso, CO, eU.SA